विचार/ब्लग Archives - Purweli online
झापा जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा र अन्य विभिन्न उदेश्य लिएर विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा गएका झापालीहरुले सामाजिक उदेश्य राखेर स्थापित झापाली समाज मुख्यतः झापा जिल्लाको सामाजिक, शैक्षिक लगायत समग्र विकासमा योगदान गर्ने उदेश्य लिएर दुई दर्जन भन्दा बढी देशहरुमा गठन भइसकेको छ । झापाली समाजहरुको छाता संस्थाको रुपमा दुई बर्ष अघि... पुरा पढ्नुहोस
हर्कमान तामाङ निकै दिनअघिको कुरा । लोहन्द्रा खोलामा कसैको मलामी गएको थिएँ । एक जना मित्रले नजिक आएर नमस्ते गर्दै भन्नुभयो, ‘होइन, लालभित्तिमा हाम्रा दुई जना निर्वाचित माननीय हुनुहुन्थ्यो । एक जनाले त झुण्डिएर आत्महत्या गर्नुभयो । तपाईं पनि त्यसै गर्नुहुन्छ कि ?’ यस्तो अप्रत्याशित प्रश्नले अलमल्लमा परेँ । एकछिन... पुरा पढ्नुहोस
2 महिना, 30 दिन अगाडि
प्रिय मित्र, नमस्कार । सबैभन्दा पहिला राष्ट्र निर्माणमा यहाँको सत्प्रयासले सफलता पाइरहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म यहाँसँग वातावरणीय मुद्दा, नवीकरणीय र दिगो उर्जा तथा उर्जा सुरक्षाबारे मेरो केही विचार साट्न चाहन्छु । यी विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त ढिलाई भइरहेछ भन्ने लागेकाले मैले यसमा... पुरा पढ्नुहोस
भागवत राउत हामी धेरै मान्छेहरु हिजोआज निकै नै आत्मकेन्द्रित भएर दृटिकोणको निर्माण गरिरहेका हुन्छौं । आफुलाई केन्द्रभागमा राखेर मात्र कुनै पनि विषयमा धारणाहरु पस्कीरहेको हुन्छौ । मैले देशको लागि यत्ति गरे देशले मलाई केहि दिएन । राज्यले मेरो क्षमतालाई चिन्न सकेन, मेरो योग्यताको पूर्ण कदर भएन आदि ईत्यादि । यस्तो... पुरा पढ्नुहोस
नरप्रसाद (एन.पी.) भण्डारी 'निराश जनता खतरनाक हुन्छन् ' प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्दै गर्दा भनेको भनाइ हो यो । अहिले नेपाली जनतामा धेरै निराशा र थोरै आशा छ । त्यसमाथि कर्मचारी निराश, कलेजमा पढाउने प्राध्यापक निराश अनि त्यसमा पनि थोरै संख्यामा रहेको बौद्धिक जनशक्ति निराश भयो भने के हुन्छ... पुरा पढ्नुहोस
श्रीमानले श्रीमतीलाई पाल्छन् कि श्रीमतीले श्रीमानलाई ?
सरिता दाहाल रिपोर्टिङको सिलसिलामा छोटो यात्रामा थियाैं । साथमा थिए एक पुरुष पत्रकार अनि पाँच जना अधिकारकर्मी । गाडीमा थियौं । बिहेको सिजन बाटोमा एक विहेको जन्ती भेटिए । त्यसपछि स्वभाविक विहेको कुरा निस्किने नै भयो । टीममा अविवाहित पत्रकार साथी मात्रै थिए । भनें, – ‘ल है यो महिना... पुरा पढ्नुहोस
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको बिगत र वर्तमान अवस्था
समग्र नेपाली राजनितीक र युग र व्यवस्था परिवर्तनका लागि सतिसाल बनेर अग्रणी भूमिकामा रहेको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा हामीमाझ जीवितै छ । गौरवमय इतिहासको पर्दालाई खोलेर हेर्दा २००४ सालबाट राणाहरुको विरुद्ध जयन्तु संस्कृतम एजेन्डा माथि विद्यार्थीहरुको आवाज संगठित भयो । क्रमिक रुपमा २०२०/२०२२ सालतिर पञ्चायती निरंकुशता विरुद्ध विद्यार्थीले उठाएको आवाज... पुरा पढ्नुहोस
रजस्वला : भोगाइ, समाजमा रहेको भ्रम र सुरक्षाका उपायहरु
अस्मिता भट्टराई पहिलोपटक रजस्वला हुदा माइतीको अनुहार र आफ्नो घरको छोरा मान्छेको अनुहार हेर्न हुँदैन, हेरेमा ठुलो समस्या आइपर्छ भनेर आफ्नो घर छोडेर अरु कसैको घर मा गएर बीस बाइस दिन बस्ने कुप्रथा थियो पहिले । अहिले त्यस्तो चलन हराउँदै गएपनि अझै पनि त्यसका अबशेस छैनन् भन्न सकिन्न। महिनावारी, रजस्वला... पुरा पढ्नुहोस